Gịnị ka Kraịst bu n'uche?
Enwere otutu aha na akwukwo nso nile nke Jisos kwuru ma obu Jisos n’onwe ya. Otu n’ime utu aha ndị kacha ewu ewu bụ “Kraịst” (ma ọ bụ okwu Hibru e si nweta ya, “Mesaya”). A na-eji mkpụrụ okwu ma ọ bụ akpa okwu nkọwa a eme ihe mgbe niile na Agba Ọhụrụ na ọnụọgụ nke 569 ugboro.
Iji maa atụ, na Jọn 4: 25-26, Jizọs kwupụtara maka nwanyị Sameria guzoro n'akụkụ otu olulu mmiri (nke akpọrọ nke ọma "Isi Mmiri Jekọb") na ya bụ Kraịst ahụ eburu amụma na ọ ga-abịa. Ọzọkwa, otu mmụọ ozi ziri ozi ọma nye ndị ọzụzụ atụrụ ahụ na a mụrụ Jizọs dịka “Onye Nzọpụta, onye bụ Kraịst Onyenwe anyị” (Luk 2:11, ESV).
Mana okwu a bu “Kraist” bu nke ndi n’amaghi ihe o putara ma obu ndi na eche na o bughi ihe kariri aha nna Jisos karie utu aha bara uru. Ya mere, gịnị ka "Kraịst" pụtara, gịnịkwa ka ọ pụtara banyere onye Jizọs bụ?
Okwu ahu bu Kraist
Okwu a bu Kraist sitere na nkpuru okwu Grik yiri ya bu Christos, nke kowara okpara Chineke, Eze E tere mmanu, na “onye nzoputa” nke Chineke dobere ma weputara ka Onwe onye nzoputa mmadu nile n’uzo onweghi onye nkịtị, onye amụma, onye ikpe, ma ọ bụ onye ọchịchị nwere ike ịbụ (2 Samuel 7:14; Abụ Ọma 2: 7).
E mere ka nke a pụta ìhè na Jọn 1:41 mgbe Andru kpọrọ nwanne ya nwoke, bụ Saịmọn Pita, ka o soro Jizọs site na ịsị, "'Anyị ahụwo Mesaịa ahụ' (nke pụtara Kraịst)." Ndị mmadụ na ndị rabaị n’oge Jizọs ga-achọ Kraịst onye ga-abịa wee zie ezi ndị Chineke n’ihi amụma Agba Ochie a na-akuziri ha (2 Samuel 7: 11-16). Ndị okenye ndị aha ya bụ Simiọn na Ana, tinyere ndị eze Magi, ghọtara na Jizọs bụ nwatakịrị ma fee ya ofufe maka ya.
Enweela ọtụtụ ndị ndu n’ime akụkọ ntolite niile. Fọdụ bụ ndị amụma, ndị nchụàjà ma ọ bụ ndị eze e tere mmanụ site n'ike Chineke, mana ọ dịghị onye a kpọrọ "Mesaịa ahụ". Ndị ndu ndị ọzọ lere onwe ha anya dị ka chi (dịka Fero ma ọ bụ Siza) ma ọ bụ kwuo azịza dị egwu banyere onwe ha (dịka ọ dị n'Ọrụ Ndịozi 5). Ma, ọ bụ naanị Jizọs mezuru ihe dị ka narị amụma atọ banyere Kraịst.
Amụma ndị a dị ebube (dịka ọmụmụ nwa amaghị nwoke), na-akọwa (dị ka ịnya nwa ịnyịnya ibu) ma ọ bụ kapịrị ọnụ (dị ka ịbụ onye sitere n'eriri Eze Devid) nke na ọ ga-abụrịrị na ọnụọgụgụ agaghị ekwe omume ọbụlagodi ụfọdụ n'ime ha ga-abụ eziokwu maka otu onye ahụ. Ma ha niile mezuru n’ebe Jizọs nọ.
N'ezie, o mezuru amụma iri pụrụ iche banyere Mezaịa ahụ n'ime awa 24 ikpeazụ nke ndụ ya n'ụwa nanị. Ọzọkwa, aha ahụ bụ "Jizọs" bụ n'ezie aha Hibru a na-akọkarị "Joshua" ma ọ bụ "Yeshua", nke pụtara "Chineke na-azọpụta" (Nehemaịa 7: 7; Matiu 1:21).
Usoro ọmụmụ Jizọs na-egosikwa na ọ bụ Kraịst ahụ e buru n’amụma ma ọ bụ Mezaịa ahụ. Ọ bụ ezie na anyị na-eleghara ndepụta aha na ezinụlọ ezinụlọ nke Meri na Josef na mmalite nke akwụkwọ Matiu na Luk, ọdịbendị ndị Juu edebela usoro ọmụmụ dị iche iche iji mee ka ihe nketa mmadụ, ihe nketa ya, iwu ya, na ikike ya dịrị. Usoro ọmụmụ Jizọs na-egosi otú ndụ ya si gbakwụnye n'ọgbụgba ndụ Chineke na ndị ya ọ họpụtara na nkwado iwu ya banyere ocheeze Devid.
Akụkọ banyere ndị ahụ depụtara na ndepụta ndị ahụ na-ekpughe na usoro ọmụmụ nke Jizọs n'onwe ya bụ ọrụ ebube n'ihi ọtụtụ ụzọ dị iche iche amụma Mesaịa ahụ ga-esi mee n'ihi mmehie nke ihe a kpọrọ mmadụ. Iji maa atụ, na Jenesis 49, Jekọb na-anwụ anwụ gabigara ụmụ ya nwoke atọ (gụnyere ọkpara ruuru ya) ịgọzi Juda ma buo amụma na ọ bụ naanị ya ka onye isi yiri ọdụm ga-abịa weta udo, ọ joyụ na ọganihu (ya mere aha otutu "ọdụm nke Juda", dịka anyị na-ahụ na Mkpughe 5: 5).
N’ihi ya, ọ bụ ezie na anyị nwere ike ghara inwe obi ụtọ nke ukwuu ịgụ usoro ọmụmụ n’akwụkwọ ọgụgụ anyị, ọ dị mkpa ịghọta nzube ha na ihe ha pụtara.
Jizọs bụ Kraịst
Ọbụghị naanị na amụma ndị a rụtụrụ aka na mmadụ na ebum n’uche Jesu Kristi, mana dịka ọkammụta Agba Ọhụrụ bụ Dr. Doug Bookman na-akụzi, Jizọs kwupụtakwara n’ihu ọha na ya bụ Kraịst ahụ (n’echiche na ọ maara onye ọ bụ). Jisos kwusiri ike na nkwupụta ya bụ Mesaịa site na izo aka akwụkwọ iri abụọ na anọ nke Agba Ochie (Luk 24:24, ESV) na ịrụ ọrụ ebube iri atọ na asaa edepụtara nke gosipụtara ma gosipụta onye ọ bụ.
Mgbe Jizọs malitere ozi ya, o biliri n’ụlọ nsọ wee gụọ otu akwụkwọ mpịakọta nke amụma Aịzaya buru banyere Mezaịa ahụ maara nke ọma. Mgbe ahụ, ka onye ọ bụla na-ege ntị, nwa onye ọkwá nkà a na-akpọ Jizọs mere ka onye ọ bụla mara na ọ bụ n'ezie mmezu nke amụma ahụ (Luk 4: 18-21). Ọ bụ ezie na nke a adịghị mma nye ndị ji okpukpe kpọrọ ihe n’oge ahụ, ọ bụ ihe na-enye obi ụtọ nye anyị taa ịgụ oge Jisọs gosipụtara mkpughe nke onwe ya n’oge ozi ihu ọha ya.
Ihe omuma atu ozo di n’akwukwo Matiu mgbe igwe mmadu n’arurita uka banyere onye Jisos bu ufodu chere na o bu John Baptist a kpolitere n’onwu, onye amuma dika Elaija ma obu Jeremaia, bu “ezi onye nkuzi” (Mak 10:17), onye Rabi (Matiu 26:25) ma ọ bụ nanị nwa nke ọkwá nkà dara ogbenye (Matiu 13:55). Nke a mere ka Jizọs gwa ndị na-eso ụzọ ya ajụjụ banyere onye ha chere na ọ bụ, nke Pita zara, sị: "Kraịst ahụ, Ọkpara nke Chineke dị ndụ." Jizọs zara na:
“Kechioma gi, Simon Bar-Jonah! N'ihi na anu-aru na ọbara ekpugheghi nye gi ya, kama ọ bu Nnam Nke bi n'elu-igwe. A sị m gị, are bụ Pita, na n’elu oke okwute a ka m ga-ewukwasị ụka m, ọnụ ụzọ ama ala mmụọ agaghịkwa aka ya ike ”(Matiu 16: 17-18, ESV).
N’ụzọ na-eju anya, Jizọs nyeziri ndị na-eso ụzọ ya iwu ka ha ghara ime ka a mata onye ọ bụ n’ihi na ọtụtụ ndị ghọtahiere ọchịchị Mesaya ahụ dị ka nke anụ ahụ na nke mmụọ nsọ na-achị, ebe ndị ọzọ nwere echiche hiere ụzọ site n’ịkọ nkọ na-esighị n’Akwụkwọ Nsọ. Gha ndị a mere ka ụfọdụ ndị isi okpukpe chọọ ka e gbuo Jizọs maka ikwulu Chineke. Ma o nwere oge ọ ga-edebe, ya mere ọ na-agba ọsọ oge niile rue mgbe oge ruru ka akpọgide ya n'obe.
Gịnị ka Kraịst pụtara nye anyị taa
Ma ọ bụ ezie na Jizọs bụ Kraịst ahụ Izrel oge ahụ, gịnị jikọrọ anyị na ya taa?
Iji zaa ajụjụ a, anyị kwesịrị ịghọta na echiche nke Mezaịa malitere ogologo oge tupu Judas ma ọ bụ ọbụna Abraham na mmalite nke mmadụ na Jenesis 3 dị ka nzaghachi maka ọdịda nke ụmụ mmadụ. Ya mere, n'ime Akwụkwọ Nsọ dum, ọ bịara doo anya onye mgbapụta nke mmadụ ga-abụ na otu ọ ga-esi mee ka anyị laghachi na mmekọrịta anyị na Chineke.
N’ezie, mgbe Chineke wepụrụ ndị Juu n’akụkụ site n’iso Abraham na ọgbụgba ndụ na Jenesis 15, na-akwado ya site na Aịzik na Jenesis 26, na-egosipụtakwa ya site na Jekọb na ụmụ ya na Jenesis 28, ebum n’uche ya bụ maka “mba niile nke ndị a gọziri agọzi ụwa "(Jenesis 12: 1-3). Zọ kacha mma iji metụta ụwa niile karịa ị nweta ọgwụgwọ maka mmehie ha? Akụkọ banyere mgbapụta Chineke sitere n’aka Jizọs gbatịrị bido na peeji nke mbụ ruo na nke ikpeazụ nke Akwụkwọ Nsọ. Dị ka Paolo dere:
n'ihi na nime Kraist Jisus unu nile bu umu Chineke n'okwukwe. N'ihi na unu niile ndị e mere baptizim n'ime Kraịst eyikwasịla Kraịst. Ọ dịghị onye Juu ma ọ bụ onye Grik, ma ọ bụ ohu ma ọ bụ onye nweere onwe ya, ọ dịghị nwoke na nwanyị, n'ihi na unu nile bụ otu onye n'ime Kraịst Jizọs. nkwa (Ndị Galeshia 3:26 –29, ESV).
Chineke họọrọ Israel ka ha bụrụ ndị ọgbụgba ndụ ya, ọ bụghị n'ihi na ọ pụrụ iche na ọ bụghị ịhapụ ndị ọzọ, kama ka ọ wee bụrụ ụzọ nke amara Chineke ka e nye ụwa. Ọ bụ site na mba ndị Juu ka Chineke gosipụtara ịhụnanya ya n’ebe anyị nọ site n’izite Ọkpara ya, bụ Jizọs (onye bụ mmezu nke ọgbụgba ndụ ya), ka ọ bụrụ Kraịst ma ọ bụ Onye Nzọpụta nke ndị niile ga-ekwere na Ya.
Paul ama osụk etịn̄ emi ke ini enye ekewetde ete:
ma Chineke mere ka ihu-n'anya-ya puta ìhè nye ayi, na n'ihi na, mb whilee ayi bu ndi-nmehie, Kraist nwuru n'ihi ayi. Ebe ayi bu ndi ezi omume site n’ọbara-Ya ub ,u a, n’aka-ayi ka agāzọputa ayi kari n’ọnuma nke Chineke: n’ihi na asi na, n’oge ayi bu ndi-iro, emewo ka ayi na Chineke di n’otu, site n’ọnwu nke Ọkpara-Ya; a ga-azọpụta anyị na ndụ ya. Ọzọkwa, anyị na-a rejoiceụrị ọ rejoiceụ n'ime Chineke site n'aka Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, onye anyị si n'aka ya nweta udo ugbu a (Ndị Rom 5: 8-11, ESV).
Na nzọpụta na idozi nwere ike ịnata site na ikwere na Jizọs abụghị naanị Kraịst mere eme, kama ọ bụ Kraịst anyị. Anyị nwere ike ịbụ ndị na-eso ụzọ Jizọs ndị na-esochi ya anya, na-amụta ihe n'aka ya, na-erubere ya isi, na-adị ka ya ma na-anọchite anya ya n'ụwa.
Mgbe Jizọs bụ Kraịst anyị, anyị nwere ọgbụgba ndụ ọhụụ nke ịhụnanya nke ya na nzukọ ya a na-adịghị ahụ anya na nke zuru ụwa ọnụ nke ọ kpọrọ "Nwunye". Mezaịa ahụ bịara otu ugboro ịta ahụhụ maka mmehie nke ụwa, otu ụbọchị, ga-abịa ọzọ wee guzobe alaeze ọhụrụ ya n'ụwa. M maka otu, chọrọ ịnọ n'akụkụ ya mgbe nke ahụ mere.
Nke gara aga Post Gara aga post:Ndụmọdụ taa bụ 14 Septemba 2020 site na Santa Geltrude
Next Post → Post ozo:Coronavirus: WHO Akụkọ Na-edekọ Ọnọdụ Globalwa Ọhụrụ; Israel bu obodo mbu iji nyeghachi iwu mgbochi mba
maka ozi zipu ozi email na [email protected]gmail.com